मलाई यौ’नको यो प्रकृया सिकाउँदा निकै आनन्द लाग्छ – News Nepali Dainik
मलाई यौ’नको यो प्रकृया सिकाउँदा निकै आनन्द लाग्छ
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष १९, २०७७ समय: १३:५५:३६
काठमाडौं । गास, बास कपासजस्तै हरेक व्यक्तिका लागि शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । हरेक प्राणीले प्रजनन्का लागि शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग कायम गर्छन । शारीरिक सन्तुष्टी, शा’री’रि’क र मा’न’सि’क स्वास्थ्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने विज्ञहरूको मान्यता रहेको छ । तिनैमध्येकी एक क्रिस्टिना लो सिङ्गापुरमा प्राचीन त’न्त्र विद्यामा आधारित भएर मानिसहरूलाई आफ्नो शरीर र शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग तथा ‘जीवनसँग प्रेम’ गर्न सिकाउँछिन् ।
उनले सिकाउने शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको साधना विधिका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौ । पहिलो कुरा त’न्त्र भनेको के हो ? त्यसका बारेमा आउँनुहोस् थोरै चर्चा गरौं । व्याकरण शास्त्रका अनुसार ‘त’न्त्र’ शब्द ‘तन्’ धातुबाट बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ ‘विस्तार’ । शैव सिद्धान्तको कायिक आगममा यस्को अर्थ गरिएको छ तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम् अनेन इति त’न्त्रम् ।
त’न्त्रको सामान्य अर्थ हो विधि या उपाय । विधि या उपाय कुनै सिद्धान्त होइन । सिद्धान्तलाई लिएर मतभेद हुनसक्छ तर विधि को सम्बन्धमा कुनै मतभेद हुन सक्दैन । त’न्त्र अथवा आगम मा व्यवहार पक्ष नै मुख्य हुन्छ । त’न्त्रको दृष्टिमा शरीर प्रधान मुख्य निमित्त मात्र हो । त्यस्को बिना चेतनाको उच्च शिखर मा पुग्न सकिँदैन त्यसैकारण त’न्त्रको तात्पर्य हो तन को माध्यमले आत्माको त्राण गर्नु ।
त’न्त्र भारतीय उपमहाद्वीपको एक वैविधतापूर्ण एवं सम्पन्न आध्यात्मिक परिपाटी हो। त’न्त्रका अन्तर्गत विविध प्रकारका विचार एवं क्रियाकलाप आउँदछन्। यसको इतिहास बहुत पुरानो छ। समयको सँगै यो परिपाटी अनेक परिवर्तन भएर गइरहेछ र हाल अत्यन्त कट्टरवादी विचारहरूदेखि लिएर धेरै उदारवादी विचारहरूको सम्मिश्रण छ। त’न्त्र विभिन्न रूपमा भारत, नेपाल, चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, कम्बोडिया, म्यांमार, इण्डोनेशिया र मंगोलियामा विद्यमान रहेको छ। त’न्त्रले क्रिया र अनुष्ठानमा बल दिन्छ । वाराही त’न्त्रमा यसका सात लक्षणहरु बताइएका छन् जो व्यवहारमा मुख्य छन् । ती सात लक्षण हुन्
सृष्टि, प्रत्यय , देवार्चन , सर्वसाधन अर्थात सबै सिद्धि प्राप्त गर्ने उपाय , पुरश्चरण अर्थात मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रिया , षट्कर्म अर्थात शान्ति, वशिकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन र मारण को साधन , ध्यान अर्थात इष्टको स्वरुपको एकाग्र मनले चिन्तन गर्नु, यो कुरा जानकारी भैसकेपछि आउँनुहोस यसको विषयवस्तुलाई लिएर केही चर्चा गरौं । हामीले त’न्त्रका विषयवस्तु का रुपम निम्न कुराहरुलाई लैजान सक्छौ । ज्ञान या दर्शन, योग, कर्मकाण्ड र विशिष्ट साधन पद्धति तथा सामाजिक आचार विचार रहेको छ । यसबाट हामीले हाम्रो शा’री’रि’क सु’ख’भो’गसँग जीवनको आन्नद पनि पाउँन सक्छौ । अब यो भैसकेपछि केही ज्ञान शा’री’रि’क सु’ख’भो’गका बारेमा पनि लैजाउँ ताकि त’न्त्र विद्यामा आधारित शा’री’रि’क सु’ख’भो’गबाट जीवनलाई बुझ्न सहज हेस् । शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग के हो आउँनुहोस् त्यसबारे चर्चा गरौं । सुरुवातमा उल्लेख गरिएजस्तै शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग भनेको जीवात्मा प्राणी मात्रको प्राकृतिक प्रवृत्ति हो । शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो ।
त्यसैले शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको इच्छा हुनु, शा’री’रि’क सु’ख’भो’गका कुरा सुन्दा आनन्दित हुनु एकदम स्वाभाविक हो। मानव जीवनका लागि भोक, प्यास र निद्रा जस्तै प्रकृतिले दिएको शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग पनि आवश्यक कुरा हो । सामान्यतया, शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग प्राप्ति वा शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग जन्य तनाव शान्त पार्ने ईच्छालाई नै शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको इच्छा भन्न सकिन्छ। परिभाषामा केही फरक भए पनि शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको इच्छा वा शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको व्यग्रता एउटा मानसिक तथा भावनात्मक जैविक व्यग्रतासँग सम्बन्धित स्वाभाविक शक्ति हो।
यो प्राकृतिक शक्ति वा व्यग्रताले निश्चित कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्दछ । यसलाई हाम्रो मस्तिष्कले सञ्चालन गर्छ। मोटामोटीरूपमा हेर्दा शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको इच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणाली सक्रिय देखिन्छन्। एक तइन्डोक्राइन सिस्टम अन्तर्गतका रा’गर’स वा ह’र्मो’नहरूले त्यसको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्द्रिय प्रणालीका अनि मस्तिष्कले। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको इच्छालाई स्नायु प्रणाली तथा शा’री’रि’क सु’ख’भो’गसँग जोडिएका अंग संलग्न एउटा जटिल प्रक्रियाको क्रियाशीलता हो भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ।
शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको इच्छा, चाहना स्वाभाविक कुरा भएकाले यसलाई दबाउनु आवश्यक छैन। शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको इच्छा शान्त पार्ने उपायहरूमध्ये सबैजसोका लागि शा’री’रि’क सु’ख’भो’गकोसँग सम्बन्धित अङ्गको चलाउँने कार्य नै प्रमुख हो। शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको प्राप्ति गर्दा शा’री’रि’क सु’ख’भो’गसँग सम्बन्धित अङ्गहरू एकûआपसमा घर्षण गराइन्छ भने आफै शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग प्राप्तिको क्षणमा जाँदा हातले वा अन्य तरिकाबाट आफ्नो शा’री’रि’क सु’ख’भो’गसँग सम्बन्ध रहेका अङ्गको घर्षण गराएर वा दबाब दिएर पनि शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको आनन्द तथा शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको चरमसुख प्राप्त गरिन्छ।
त्यही विधि सिकाउने त’न्त्र गुरु क्रिस्टिना भन्छिन, ‘म केवल स्वासप्रश्वासका थप क्रिया गरेर आफुलाई शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको प्राप्तिको उत्कर्षमा पुर्याउन सक्छु ।’ यो नै त’न्त्र विधि हो । उनका अनुसार यो जो सुकैले सजिलै सिक्न सक्छ । उनले दिएको जानकारी अनुसार त’न्त्र शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको भन्दा धेरै नै बृहत छ । शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको क्रिया भनेको यस्को एक सानो पक्ष मात्रै हो । अवश्य पनि हामीले माथि चर्चा गरिसकेका छौ कि त’न्त्रको क्षेत्र के हो ? त’न्त्रका माध्यमबाट हामीले त्यसमा विभिन्न आयामहरु थप्न सक्छौ ।
यसबाट हामीले शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग प्राप्तिका बारे चेतना जगाउन सक्छौ । उनले भनिन, ‘केवल सास र उर्जाबाट । वास्तवमा तपाँई आफुभित्र पस्नुपर्छ ।’ उनले थप्दै भनिन, ‘त’न्त्रको विधिबाट शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको अभ्यास गर्दा शरीरमा थप आनन्दित अनुभूति हुन्छ ।’ त’न्त्र अभ्यास सुरु गर्दा उनको उमेर मात्रै ३० वर्षको थियो । उनलाई सधैं यहाँ अझ धेरै कुरा छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यसपछि उनले खोज्नुपर्ने र पत्ता लगाउँनुपर्ने धेरै कुराहरु रहेको महसुस गरिन् । विशेष गरेर हाम्रो समाजमा शा’री’रि’क सु’ख’भो’ग प्राप्तिको मार्ग एक प्रतिवन्ध लगाइएको शब्द हो ।
पश्चिमाहरुको तुलनामा पुर्वमा वा एसियाली मुलुकहरुमा मान्छेहरु यस बारेमा खुलेर कुरा गर्दैनन् । जब उनले त’न्त्र सिकाउँछिन भन्ने कुरा पत्रिकाहरुमा आउँन थाल्यो तब धेरैलाई जानकारी भयो । उनको कामको चर्चा धेरै भएपछि उनकी आमा लगायत घर परिवारमा भएका अन्य सदस्यहरुले पनि लाज मान्न थालेका थिए ।
उनकी आमालाई अरुले, ‘तिम्रो छोरीले शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको बारे सिकाउँछे’ भनेर भन्लान भन्ने ठुलो पिर थियो । पछि उनले परिवारलाई यसबारेमा राम्रोसँग जानकारी गराइन् । उनी यो पनि मान्छिन् कि अहिलेको पुस्तामा पहिलेको भन्दा शा’री’रि’क सु’ख’भो’गका बारे धेरै जानकारी छ । यहाँ भिडियोमा देखिएको यो प्रक्रिया त्रि–आयमिक चालमा आधारित छ । यस्मा ढाड पुर्ण रुपमा स्वत’न्त्र हुनुपर्दछ । यस्तो गर्दा शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको पूर्ण प्राप्ति महसुस भए गज्जब तर नभए पनि केही फरक भने पर्दैन ।
यस प्रक्रियामा लामो सास लिँदा तपाईँले अलिकति अगाडि सार्नुपर्छ । यसरी गर्दा तपाईँको रक्तप्रवाह थप बढाउँन आफ्नो शा’री’रि’क सु’ख’भो’गको इच्छाको उर्जा जागृत गराउँनुपर्छ । यस्तो गर्दा जे हुन्छ त्यसलाई निरन्तर हुन दिनुपर्छ । यो बेला तपाईँले जे महसुस गर्नुहुन्छ त्यो नै तपाईँको उर्जा हो । उनीकहाँ त’न्त्र सिक्न आएकी एक महिलाले भनिन, ‘म आफु हुन पाउँदा निकै स्वत’न्त्र अनुभूत गर्छु । म आफ्नो उर्जाको उपयोग गर्न नयाँ उपाय सिक्छु ।
आफैँलाई सशक्त बनाउँन । स्वत’न्त्र अनुभव गर्न, प्रेम गर्न । मानिसहरुसँग अझ मिल्न र गहिरो सम्बन्ध बनाउँन ।’ उनले अगाडि थप्दै भनिन, ‘सामान्यतया यो अवस्थामा पुग्न हामी आफैंलाई स्पर्श गर्छौ । अब कुनै स्पर्शबिना । तपाईँले आफ्नो सास र उर्जासँग खेल्ने हो ।’ अन्त्यमा क्रिस्टिना भन्छिन, ‘मलाई निकै आनन्दको अनुभूति हुन्छ । जब मैले मानिसहरुलाई सहयोग गरिरहेको महसुस गर्छु र उनीहरुमा परिवर्तन देख्छु । तपाईँले अन्वेषण गर्नुपर्छ र पत्ता लगाउनुपर्छ । तपाइँले जीवनलाई सुखमय बनाउँनुपर्छ ।’
Last Updated on: January 3rd, 2021 at 1:55 pm